IZINTO EZILI-15 NGOKWENENE ABANTU ABONWABILEYO ABAZIKHATHALELE - UNXIBELELWANO
Izinto ezili-15 Ngokwenene Abantu abonwabileyo abaziKhathalele
Ulonwabo yimeko yengqondo. Abantu abonwabileyo ngokwenene bahlala benesimo sengqondo esifanelekileyo nangona bejongwa ngokupheleleyo kukubi ebomini. Aba bantu banethemba lokuziphatha okuhle kunye nokunyaniseka okuphezulu. Banobubele, banothando, banenkathalo kwaye banovelwano kuye wonke umntu ngokungakhethiyo. Ukuwajonga, uyakuqonda ukuba bazithembe kangakanani, banelisekile kwaye bahlala ngokukhululekileyo xa bekunye nabo. Yintoni ebagcina benesimo esihle kwaye benobushushu obunelanga kukuba kukho izinto ezithile ezonwabisayo ngokwenene ngabantu abangazikhathalelanga.
1. Abakhathali ngokuqokelela izinto eziphathekayo.
Ngokuqinisekileyo, ukuba neemoto zodidi, izindlu ezinkulu kunye nomthwalo wemali ebhankini kulungile. Kodwa, ezi zinto aziqinisekisi ulonwabo kunye nempumelelo. Abantu abonwabileyo ngokwenene banomdla ngakumbi ekusebenziseni izixhobo zabo ukongeza ixabiso kubomi babantu kunye nokuphila ubomi obunesidima, obuthobekileyo. Ukuba imali iqhubeka isiza, bonwabile. Ukuba imali ayizi, bahlala bonwabile kwaye banelisekile.
2. Abakhathali ngokufumana nantoni na njengembuyekezo.
Wonke umntu onwabela umphelelisi okanye umvuzo ongalindelekanga. Nangona kunjalo, ngelixa abanye benqwenela ukunconywa kunye nokufumana umvuzo, abantu abonwabe ngokwenyani bakhonza kwaye banceda abanye ngaphandle kokulindela nantoni na. Kubantu abonwabileyo ngokwenyani, umvuzo kukwazi ukuba bongeze ixabiso kwaye babucebisa ubomi bomntu.
Uyenza njani intetho elungileyo ye-ppt
3. Abakhathali ngokuhambelana nokulindelwe luluntu.
Abantu bahlala bephantsi koxinzelelo lokuhlangabezana nolindelo loluntu, oluhlala luxinisa kwaye luxinisa. Ngubani onxulumana naye, usebenzele kwaye utshate naye ngokufuthi uyalelwa kukuthula. Abantu abonwabileyo ngokwenene abakhathali ngokuhambelana nokulindelweyo kunye nemigangatho yoluntu. Bajonge nje ngaphakathi kubo kwaye benze into evakalelwa entliziyweni yabo. Ngokumamela amathumbu abo kunye nokulandela iintliziyo zabo, bayakwazi ukwenza ulwaneliseko olunzulu kunye nolonwabo.Intengiso
4. Abakhathaleli ikhethe labantu.
Abanye abantu banemibono engamkelekanga malunga nenkcubeko, intlalontle kunye nenkolo. Ngokwenene abantu abonwabileyo abakhathali nakweyiphi na kuloo nto. Baphatha wonke umntu ngokulinganayo ngaphandle kocalucalulo ngokusekwe kwizimo zengqondo ezingachanekanga okanye kwiingcinga ezinje ngesondo, ubuhlanga, inkolo, ubudala, inkanuko yesini kunye nenqanaba lentlalo noqoqosho. Abantu abonwabileyo ngokwenene bayakugweba ukuba ungubani kwaye unakho kangakanani-hayi apho uvela khona okanye umbala wesikhumba sakho.
5. Abakhathali kwabanye ' ukuvunywa okanye ukuqinisekiswa.
Abantu abonwabileyo abakukhathalelanga ukuba ucinga ntoni ngabo kuba bayazazi ukuzixabisa kwabo. Bayamamela kwaye bathathe inxaxheba kwinto ethethwa ngabanye, kodwa ungafuni ukuqinisekiswa nangubani na. Bayazi ukuba ukuba uphilela ukwamkelwa ngabantu, uya kufa ngenxa yokwaliwa kwabo. Abantu abonwabileyo ngokwenyani benza nje into ekufuneka yenziwe kwaye ungaze uvumele abathandekayo babatyhafise.
6. Abakhathali ngokulunga ngalo lonke ixesha.
Abantu abonwabileyo ngokwenene abanangxaki nokuba bangalunganga ngamanye amaxesha. Emva kwayo yonke loo nto, akukho mntu wazi yonke into kwaye uneempendulo zonke ebomini. Kungokwamkela ukuba uphosakele ukuba uvule iingcango zokufunda okulungileyo. Abantu abonwabileyo ngokwenene bayamamela kwaye basebenzise izimvo ezizezona ngamanye amaxesha ezichasene nezabo. Oku kuqhuba ukufunda, kuvumela intlalo-ntle kwaye kukhulisa ulonwabo.
7. Abakhathaleli iimeko ezingafanelekanga.
Abantu abonwabileyo ngokwenene abayikhathalelanga imeko engafanelekanga kuthethathethwano oluqinisekileyo okanye ixesha lokuphuma. Bayazi ukuba iimeko ezinje ngoxinzelelo, ukunciphisa amanqanaba olonwabo kwaye kunokuba yingozi, kubandakanya ingxolo, indawo emdaka nengcolileyo. Endaweni yoko, abantu abonwabileyo ngokwenene bayayixabisa kwaye bayayikhusela imimandla eyenza amanyathelo kunye nokukhetha kube lula kwaye kumnandi, njengeendawo ezinoxolo njengeepaki.Intengiso
8. Abakhathali ngothelekiso lwasekuhlaleni.
Abantu abonwabileyo ngokwenene abazithelekisi nabanye. Banokufuna ukufunda ukuba yintoni abanye abayenzayo ngcono ukuze baphinde baphumelele ngokufanayo, kodwa bahlala benomdla wokujolisa kwinkqubela phambili yabo kwaye badumise abanye babo. Oku kubenza bonwabe ngakumbi kwaye kubakhusele kumona, inzondo kunye nemvakalelo engafanelekanga yokuphakama kunabanye.
9. Abakhathalele ukugxuphuleka kwimicimbi yabantu.
Abantu abonwabileyo ngokwenene abangeni kwimicimbi yabanye abantu. Ngokuqinisekileyo, baya kukunceda ukuba uyayicela kwaye uzame ukungenelela xa ucace gca kwicala elingalunganga, kodwa bajolise ekufumaneni eyabo indlu ngaphambi kokuzama ukunceda abanye. Oku kuqinisekisa ukuba bajolise kwaye kunceda ukunqanda ukungqubana nabantu abafuna ukushiywa bodwa.
10. Abayikhathalele intlebendwane.
Ngokwenene abantu abonwabileyo abayikhathalele intlebendwane kunye nokuhleba ngamarhe. Banelisekile bubomi babo kwaye abanamnqweno wokuzixhalabisa ngokwenzeka kubomi bomnye umntu. Ekuphela kwabantu abakhathalele intlebendwane ngabantu abanzulu abebomi babo abuzalisekisi ngokwaneleyo.
11. Abakhathaleli ubudlelwane obunetyhefu.
Ubudlelwane obuyityhefu abubandakanyi ububi obucacileyo njengokuphathwa gadalala ngokwasemzimbeni nokubizwa ngamagama, kodwa nezinto ezingacacanga ezinje ngezikhalazo ezihlala zikhona kunye nokutshintsha kwemozulu okukurhuqa phantsi. Ngokwenene abantu abonwabileyo abazikhathalele zonke iintlobo zobudlelwane obunetyhefu kuba olu lwalamano luzisa kuphela iziphumo ezinetyhefu. Abantu abonwabileyo ngokwenene bazingqonge ngabantu abanethemba abafuna okungakumbi ebomini kwaye bayakwazi ukwakha ubudlelwane obunempilo obuzisa uvuyo.Intengiso
12. Abakhathali ngokubamba ingqumbo.
Sonke siye sakhathazwa zizenzo okanye amazwi omnye umntu ngexesha elithile. Ngelixa ukubamba ingqumbo nenzondo nxamnye nabo bonayo kulula, abantu abonwabileyo ngokwenene bayazi ukuba le ayisiyondlela ilungileyo. Bayazi ukuba ukubamba inqala yindlela eqinisekileyo yomlilo yokutyhefa iingcinga zakho kwaye kunokwenzeka nezenzo zakho. Abantu abonwabileyo ngokwenene baxolela kwaye baqhubele phambili. Oku kuthetha ukuphakama ngaphezulu komcimbi kwaye uzikhulule kwinzondo. Njengoko uConfucius watsho, ukwenziwa into embi akuyonto, ngaphandle kokuba uqhubeka uyikhumbula.
13. Ababukhathalelanga ubuxoki.
Unokuthi wonke umntu unetyala lokuxoka ngexesha elinye okanye kwelinye. Kunokuba njalo, kodwa abanye abantu badla ngokuxoka ngokulula kunabanye. Ngokwenene abantu abonwabileyo abalikhathaleli eli qela labantu lokugqibela nobuxoki babo. Ubomi buwa ngokukhawuleza xa bugcinwe kunye ngobuxoki nenkohliso. Abantu abonwabileyo ngokwenene bayayiqonda le nyaniso kwaye bayazi ukuba kungcono ukuba unganiki nkcazo kunokuba ugoqe inyani okanye unike ingxelo engeyonyani.
14. Abakhathali ngokukhalaza.
Izikhalazo ziziqhamo zobomi obungonelisekiyo. Abantu abonwabileyo ngokwenene abakhathali ngokukhalaza kuba banelisekile bubomi babo. Abakhathaleli ukungcungcutheka rhoqo nokuba aba bantu bakhathazekile emoyeni. Ngokwenene abantu abonwabileyo banombulelo ngento abanayo kwaye banethemba lokuza kwenzeka nokuba izinto zingahambi ngendlela yabo.
15. Abakhathali ngempindezelo.
Okokugqibela, ukuba ufuna ngokwenene ukuphila ubomi obonwabisayo, ngekhe ubenakho ukuziphindezela ngokuzimeleyo komnye umntu. Abantu abonwabileyo ngokwenene bayaziphindezela. Benza uxolo nomcimbi kwaye endaweni yoko bafune iindlela zokubeka amandla angalunganga ekusebenzeni okuhle, nokuvelisa.Intengiso
Ubomi abuhlali busahamba kakuhle. Ngamanye amaxesha izinto aziyi kuhamba ngendlela yakho. Nantso ke indlela obusebenza ngayo ubomi. Kodwa, ulonwabo luhlala lukhetho naxa ucinga ukuba akunjalo. Khetha ukonwaba ukusukela namhlanje!
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: IArd nje ngeflickr.com
ungaze uxhatshazwe uthule
iiklasi free online for fun
ixabisa malini umntu
Eyona mququzeleli lwe-iphone
Ngaba iprinta yaseFrance ibangcono
eyona misebenzi mihle ukuqala kwiminyaka engama-30 ubudala
Ukucinga Ngendlela Eyakhayo Ulonwabo Uluntu 2 Umthendeleko Iincwadi